UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay gobolka Bari iyo Khasaare xooggan oo ka dhashay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay gobolka Bari iyo Khasaare xooggan...
Boosaaso (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya dagaal ku dhex maray deegaanka Af-Urur ee gobolka Bari ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ka tirsan.
Warar ay haleyso Halqaran.com ayaa tibaaxaya, in duqeyn hoobiyaal ah ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab saldhig ay ciidamada Maamulka Puntland ku lahaayeen deegaanka Af-Urur.
Hoobiyaasha kadib ayaa la sheegay in dagaal xoog leh uu ku dhex maray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo ciidamada Maamulka Puntland meel u jirta 8km deegaanka Af-Urur.
“Waxaa dagaalku ka dhacay meel la yiraahdo Marada-Goobtaa oo ilaa 8km u jirta magaalada, halkaa dagaal xooggan baa ku dhexmaray, waxaana dib loo riixay qoladii waa la kiciyay Al-Shabaabta ahayd, Xaggaa iyo Marraje” ayuu yidhi guddoomiyaha deegaanka Af-Urur oo Warbaahinta la hadlay.
Wararka ayaa sheegaya in Khasaare uu soo kala gaaraya labada dhinac, iyadoo maamulka Puntland saraakiil u hadashay ay sheegeen in illaa 15 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab, halka labo askari ay ka dhinteen ciidamada maamulka Puntland.
Ugu dambeyn, Deegaanka Af-Urur ee Gobolka Bari ayaa ah meel ay saldhig ku leeyihiin ciidamada maamulka Puntland, balse dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar ku soo qaada saldhigga ay ciidamada Puntland ku leeyihiin deegaankaas.
Dagaalka ka dhacay ee goblka Bari